Adobe Lightroom oo hadda laga heli karo Apple M1 iyo Windows 10 Arm | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Lightroom wuxuu noqdaa barnaamij asal u ah Apple M1 iyo Windows 10 oo ku yaal ARM
Wax walboo wey soo ifbaxayaan isla markaana waxay ku dhacayaan qalabka moobaylka iyo kuwa aan ahayn iyo Hayso Apple M1 chip ama ARM midkoodii hore (Sida kuwaas oo kale waa Qualcomm Snapdragon) oo wata Windows 10. Waana sababtaas sababta Adobe dib ugu dhisay Lightroom si ay u noqoto barnaamij u dhashay labadaas nooc ee chips-ka ah ee la soo sheegay, ama Apple ama Microsoft.
Una soo jeedin xiiso leh oo ku xiran hagaajinta waxqabadka iyo waxtarka tamarta on Apple M1 iyo Qualcomm Snapdragon chips (Windows 10); iyo inaan ku aragno tan dambe aalado badan oo mobilo ah oo wata Android oo ah Nidaamka Howlgalka.
Taasi waa, in noocii ugu dambeeyay ee Adobe Lightroom Hadda waa codsi hooyo u ah barnaamijyada Apple M1 iyo Windows ARM. Wax walba waxaa loogu talagalay hagaajinta waxqabadka iyo waxtarka tamarta ee barnaamijyadan iyo in mustaqbalka fog aan isticmaaleyaashu ku raaxeysan doonno iyaga oo awood u leh inay sii dheereeyaan nolosha batteriga laptop-ka ama waxqabadkiisa howlaha walaxda weyn.
Adobe waxay ku adkaysanaysaa inay sii wadi doonto inay hagaajiso waxqabadka barnaamijyada noocan ah cusbooneysiinta mustaqbalka, mana qaadan doonto waqti dheer in lagu sameeyo kombiyuutarrada ku saleysan Intel; Si kale haddii loo dhigo, wuxuu inaga doonayaa dhamaanteen inaan faraxsanaano si wax ku oolnimada qalabkayagu ay ugu fiican yihiin.
Taasi waxay tiri, a Sidoo kale nooca asalka ah ee Apple M1 iyo Windows Arm of Photoshop kanaalka beta bisha Nofeembar, taas oo muujinaysa inaan dhowaan yeelan doonno nooc kama dambeys ah oo aan ugu raaxeysanno waxyaabaha la sheegay. Kuwii idinka mid ah ee leh Hal-abuurnimo Cloud ayaa mari kara beta-ka si ay u qabsadaan.
Goor dhow ayaan waxbadan ka ogaan doonnaa Maxaa laga filan karaa Adobe sannadka 2020 oo mashquul ah oo maxaan ahayn awoodaan inay markhaati ka noqdaan dhawaqooda cusbooneysiinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Lightroom wuxuu noqdaa barnaamij asal u ah Apple M1 iyo Windows 10 oo ku yaal ARM
Sida loogu abuuro qoraalka neon 5 talaabo adoo adeegsanaya Adobe Photoshop